Keydinta Guri-Google - SmartMe
Dom » Ku keydi qeybta 'Guri Google'
Amazon Alexa, Guriga Google, dib u eegista
Smart + WiFi Shumaca - guluubka caqliga u leh qof walba
guluub, hormarinta, nalka smart, wifi, guluubka
Waxaan jecelahay inaan dib u eego noocyada kala duwan ee laydhka. Waxaan bilaabayaa inaan ka fikiro inay tani tahay hiwaayadeyda cusub isla markaan dib u eegay alaabada quruxda. Taasi waa sababta maanta aan dib u eegis ugu sameynayo nalalka Ledvance - Smart + WiFi Shumaca Multicolor. Aan aragno haddii ay jiraan ...
Apple HomeKit, Guriga Google, dib u eegista
Yale Smart Keypad - Keyboardkeyga guriga
kiiboodhka, dhejis, xakamayn caqli, yale
Waxyaabo kala duwan ayaan ku arkay gurigayga. Waxaan automated laydhadhkayga, indhoolayaasha, kululaynta iyo muddo dheer ayaan sidoo kale doonayay in aan otomatiga qufulka. Waxaan haystay dhowr ka mid ah, ugu dambayntiina Linus Smart Lock ayaa soo degay irriddayda. Goorma...
Guriga Google, News
Tallaabooyin yar oo lagu taageerayo ganacsatada maxalliga ah - ku soo biir caqabadda #LocalLove
google, khariidadaha google, khariidadaha google
Socodku wuxuu noqon karaa cudurdaar weyn in wax wanaagsan loo sameeyo bulshada maxalliga ah laguna taageero ganacsatada aagga. Waxa kaliya ee ay qaadataa waa dhowr tallaabo oo calaamado ah - kuwa socod ku socda iyo kuwa ku jira arjiga Khariidadaha Google, si loo cusboonaysiiyo ...
Thanks to Viomi iyo Google Home, waxaad ku nadiifin kartaa qolka la xushay cod ahaan
guriga google, viomi
Viomi waxay si rasmi ah u xaqiijisay in moodooyinka la xushay aan ku nadiifin karno qolalka adoo ka soo wacaya Google Home! Moodooyinka taageera qaabkan waa Viomi Alpha UV, Alpha (S9) iyo SE & V3! Thanks to Viomi iyo Google Home ...
Guriga Google, dib u eegista, Smart Auto
Roav Anker Bolt Set - Sida Loogu Bedelo Baabuurkaaga "Kitta" kana soo jeeda "Knight Raider"
Waxa daabacay	Paul
caawiye, Kaaliyaha Google, google, boodhka roav, auto smart
Kumaa idinka mid ah oo xusuusta taxanaha "Knight Raider" oo lala yeeshay David Hasselhof? Waxaan ku degdegay inaan sharaxaad ka siiyo akhristayaasha da 'yar. "Knight Raider" waa soosaarid laga soo bilaabo 1982 - 1986-kii oo ku saabsan dabeecadda weyn ee Michael iyo gaarigiisa oo leh xiiso ...
Yale Linus Smart Lock - ugu dambeyntiina waa quful xariif ah oo ka gudbay imtixaanka
gerdview, dhejis, linus smart qufulka, quful smart, tedee, waan xirnaa, yale
Albaabkaygu durba wuu ka badbaaday laba quful smart. Markii ay noqotay in seddex meelood meel ii yimaado, waxaan dareemay hubaal hubin la'aan ah. Waxaan eegay inlay qalooca, gacan qabashada kacsan, iyo albaabka xoogaa kala jeexan. Yale Linus Smart Lock ma ...
Google Home wuxuu kugu soo wargalin doonaa oo keliya wicitaanada markaad guriga joogto
Haddii aad u adeegsato Kaaliyaha Google si aad u maamusho aaladaha gurigaaga oo aad u isticmaasho barnaamijka Google Duo, markaa sifiican ayaad u ogtahay ogeysiisyada Google Home. Si kastaba ha noqotee, Google waxay rabtaa inay soo bandhigto noocyo kale oo codsigeeda ah. Waxay u egtahay mid xiiso leh! Waan arki doonaa ...